1. Betsaka ny olona mitady ny tsiambaratelo ho tonga lafatra. Miaraka amin'ny seza fiandrianan'ny fahatanorana Amin'ny alàlan'ny endrika tsara amin'ny fomba hanary tavy kibo. Ho fanampin'ny fampodiana ny tanora Manampia firaisana ara-nofo amin'ny fanaovana akanjo izay tonga lafatra amin'ny endriny rehetra. Arahana fahasalamana tsara ihany koa Tsy misy afaka manome antsika afa-tsy ny tenantsika ihany Androany dia manana dingana tsotra isika, saingy mila faharetana sy fifehezana kely izany. Raha mandalo izany ianao dia hahazo antoka fa hiverina ho azo antoka ny tarehinao tsara tarehy.
2. Misotroa rano madio iray vera alohan'ny sakafo tsirairay. Ity fomba ity, ankoatry ny fanaovana ny hoditrao ho tsara tarehy Rafitra excretory Manampy antsika koa hameno haingana tsy mampino Satria ampahany lehibe amin'ny vatana ny rano Mamelombelona mandritra ny andro Ary rano fisotro 5 - 10 minitra alohan'ny hisakafoanana rehetra. Mahatonga antsika hisotro haingana kokoa ihany koa Satria rano no nampidirina tao anaty lapoaly noho ny sakafo aloha Fa tsy maintsy ataoko fahazarana tsy tapaka izany. Hitanao ve ny fomba hahavery ny tavy amin'ny kibo? Tsy sarotra
3. Safidio ny mihinana Mahasoa azo Rehefa manomboka tonga ny kibo Mampiseho izany fa natao ambanin-javatra ny sakafo ara-tsakafo amin'ny safidy sakafo, sa tsy izany? Tsy maninona, manomboka hatrany hatrany. Miaraka amin'ny safidinao amin'ny sakafo tsara, izay zava-dehibe amin'ny fomba fahaverezan'ny tavy Ny zavatra voalohany dia ny mifady ny zava-pisotro mahamamo. Tsindrin-tsakafo be siramamy Aza mihinana sakafo mihintsy. Na mifamadiho amin'ny lafarinina ilaina toy ny varimbazaha manontolo Na mofo, mofo varimbazaha antonony isaky ny misakafo Raha vary izy, dia arotsaka iray isaky ny sakafo. Manampia sakafo proteinina izay ilaina amin'ny fanamboarana ireo faritra simba. Ary sakafo misy fibre betsaka kokoa Aza adino fa izay mihinana miasa ho an'ny vatanao. Teny azo itokisana foana izy io. Andao hisafidy ny hanana zavatra mahasoa ao amin'ny vatana anio tsara kokoa.
4. Misafidiana fampihetseham-batana ankafizinao ary ataovy tsy tapaka, ary olona an-jatony no tsy mankafy manao fanatanjahan-tena mitovy amin'izany. Ka tsy te hifantoka amin'izany aho Tsy maintsy fanatanjahan-tena izany na karazana fanatanjahan-tena, mangataha fotsiny fa io no fampihetseham-po tadiavintsika. Ary ataovy tsy tapaka, 3-5 andro isan-kerinandro, miankina amin'ny fanamorana Saingy tsy maintsy manao tohiny mandritra ny 30 minitra ka hatramin'ny adiny iray miankina amin'ny taona sy ny fahasalamana ara-batana Ny olona sasany toy ny mandeha, mihazakazaka, yoga, mandihy, bisikileta, milomano, cardio, sns .. Hoy aho fa raha manao izany matetika. Ary miaraka amin'ny fihetsika hafa Ho an'ny fomba fampihenana ny tavy amin'ny kibo Tsy maika Hahena tsikelikely ny tavy any anaty kibo, arahin'ny salama Ary ny famirapiratana toa ny miharihary
5. Miezaha ho be fanantenana Mampihena ny adin-tsaina Ampitomboy tsy tapaka ny herinao tsara sy ny EQ. Ity no zavatra sarotra indrindra tokony hatao. Amin'ny fiezahana mifehy ny eritreritra, ny fihetsem-po na ny adin-tsaina Raha mbola olombelona sy velona isika Fa miezaha hahatakatra zavatra Eto amin'izao tontolo izao izay tsy misy azo antoka Tao amintsika vetivety ny fahasambarana. Tonga ny fijaliana ary tsy ho ela. Ny vahaolana rehetra dia misy vahaolana, mitandrema fotsiny. Ary amin'ny fotoana fitsaharana Omeo hery ny tenanao Avelao vetivety ny enta-mavesatra ary mifantoha amin'ny fikarakarana ny vatanao aloha. Aza avela handratra antsika ny adin-tsaina. Arakaraka ny fihenjanana no mihinananao Arakaraka ny fihenjanana no mahasosotra kokoa Ny tena zava-dehibe dia ny fihenjanana Fahavalo amin'ny fahasalamantsika amin'ny endriny rehetra
6. Tsotra, tsy sarotra mihintsy, raha ny tena izy dia ny fikarakaranao tena. Miaraka amin'ny fitiavanao ny tenanao ary manome zavatra tsara ho an'ny tenanao indray Fa mitaky fanaovana tsy tapaka Satria tsy amidy ny fahasalamana tsara Raha tianao dia tsy maintsy ataonao samirery.